Induction Soldering Wires Onto Connection
Induction Soldering Wires Onto Connection Ne IGBT Induction Heating Units
Chinangwa Heat connector assemblies for soldering
Material Nyaya yedare
Tin yakafukidzwa nendarira zviteshi Solder paste
Kupisa 500 ° F (260 ° C) 5-7 seconds
Zvishandiso DW-UHF-6kW kupisa induction sisitimu yakagadzirirwa neiri kure kupisa chiteshi, iine maviri 0.66 μF capacitor. Iyo induction yekupisa coil yakagadzirirwa uye kugadzirirwa zvakanakira ichi chishandiso.
Maitiro Kurova kamwe chete helical coil inoshandiswa kupisa iyo solder paste. Iwo ekubatanidza anoiswa mukati meiyo induction yekupisa coil uye RF simba rinoshandiswa kwema5-7 masekondi kusvikira chinongedzo chapisa.
Solder paste inoiswa kujoini nenzira mbiri, yakadyiswa-yakadyiwa kana manyore.
Mhedzisiro / Bhenefiti • Zvichienzaniswa nekushandisa bhuku resimbi simbi, kupisa induction kunonyatso shandisa kupisa kune epamusoro emhando dzakabatana maseru.
• Izvi zvakakosha pakubatanidza ne otomatiki system. Nekunamatira-kudyisa iyo solder zvimwe zvinonakidza nzvimbo zvinogadzirwa.
Categories Technologies Tags high frequency soldering wires, induction soldering wires, RF induction soldering, soldering wires Post navigation
Induction Soldering Wire yeCo-axial
Induction Soldering Brass Heating Exchanger